I-Apple TV + Izabelo zeVidiyo eSishwankathelayo yeXesha 1 loMlobi weZiporho | Ndisuka mac
I-Apple TV +, njengenye yeenkonzo zevidiyo, uzibophelela kwimixholo yabantwana, esidlangalaleni ethi, emva kwayo yonke loo nto, ibe lelona xesha linamahhala ukonwabela la maqonga. Umxholo wabantwana, sifumana uthotho Umbhali wesiporho, uthotho ukuba isandula ukubonakalisa ixesha layo lesibini.
Ukuze oyena mncinci alonwabele eli xesha lesibini, ngaphandle kokubakhumbuza ukuba luthotho olunjani kwaye bayonwabele njani, kwisitishi se-YouTube sika-YouTube, bathumele Isishwankathelo sevidiyo yayo yonke into eyenzekileyo ngexesha lokuqala lonyaka, ividiyo ethi, nangona ingesiNgesi, sinokongeza imibhalo engezantsi ukwenza ukuba kubelula ukukhumbula abantwana.
Nangona kuyinyani ukuba uthotho lwenzelwe abantwana kunye nabantu abancinci, luluhlu oluthi sinokubona ngokugqibeleleyo nabantwana bethu Kwaye oko kuyakusikhumbuza iifilimu ezintle esazibona njengomntwana, apho sasikholelwa ekubeni nantoni na inokwenzeka.
Umbhali womoya usixelela ibali lesiporho esivela kwivenkile yeencwadi yommelwane, isiporho esikhupha abalinganiswa abaziintsomi kwihlabathi lokwenyani. Abantu abane abancinci abayinxalenye yoluhlu, bayahlangana sombulula imiba elindileyo enesiporho.
Ixesha lokuqala thotho Umbhali wesiporho uphumelele amabhaso emini ka-Emmy iNkqubo eBalaseleyo yaBantwana okanye uMxholo woSapho kwaye ifumene amagama atyunjiweyo ali-16 kukhuphiswano olwahlukeneyo, nangona kungekho namnye kubo obaluleke ngaphezu kukaEmmy weenkqubo ezisasazwa ngexesha lasemini.
Ixesha lokuqala lenziwe Iziqendu ezili-13 zihlala imizuzu engama-25 phantse zonke zenziwe ngamalungu ama-2 okanye ama-3, ke ukuba abantwana bethu abaphumli, akukho mfuneko yokuba siyigcine ukuvalelwa ukuya esihlalweni kangangeyure.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Apple TV + yabelana ngesishwankathelo sevidiyo yexesha loku-1 loMlobi woMoya
I-TvOS 3, i-watchOS 14.6 kunye ne-iOS 7.5 betas 14.6 ekhutshiweyo